Debian 6 yekumisikidza nhanho nhanho | Kubva kuLinux
Debian 6 yekumisikidza nhanho nhanho
Mune uno mukana, tichaona maitiro ekuisa Linux Dhiyabhorosi 6. Tichatanga neruzivo rudiki uyezve kune edu, iyo kuisirwa yeiyi huru distro, ine screenshots inosanganisirwa yekuona kuri nani kweumwe neumwe Paso.
Dany Rey ndomumwe weiyo vakundi kubva kumakwikwi edu evhiki nevhiki: «Goverana zvaunoziva nezve Linux«. Makorokoto! Kuzvidya mwoyo nezve kwikwidza uye woita mupiro wako kunharaunda, sezvakaita Dany?
Sekureva kweiyo wiki yepamutemo, Debian Linux ndeye yemahara inoshanda sisitimu, yakagadzirwa nevanozvipira vanopfuura chiuru kutenderera pasirese, vanoshanda pamwe neInternet.
Kuzvipira kwaDebian kusoftware yemahara, hwaro hwevazvipiri, hwayo husiri hwekutengesa, uye yayo yakavhurika modhi yekuvandudza inosiyanisa kubva kune kumwe kugoverwa kweiyo GNU inoshanda sisitimu. Zvese izvi maficha uye nezvimwe zvinounganidzwa mukufona Debian Yemunhu Chibvumirano.
Iyo yakazvarwa mu1993, ine pfungwa yekugadzira iyo GNU system uchishandisa Linux sekernel. Nekudaro, chirongwa cheDebian, iro sangano rinoona nezvekugadziriswa kwaro nhasi, rinogadzira masisitimu eGNU anoenderana nedzimwe tsanga (Debian GNU / Hurd, Debian GNU / NetBSD uye Debian GNU / kFreeBSD).
Chimwe chezvinangwa zvacho chikuru kupatsanura yemahara software kubva kune-yemahara software mune ayo mavhezheni. Kusiyana nemamwe ma distros, modhi yekuvandudza yakazvimiririra kumakambani makuru: inogadzirwa nevashandisi pachavo, pasina zvinoenderana nechero nzira pane zvekutengeserana zvinodiwa. Debian haitengese software yayo zvakananga, inoita kuti iwanikwe kune chero munhu ari paInternet, kunyangwe ichitendera vanhu kana makambani kuti vatengese software iyi chero bedzi rezinesi rayo richiremekedzwa.
Debian Linux inogona kuiswa uchishandisa dzakasiyana nzira dzekumisikidza, senge DVD, CD, Blu-Ray, USB tsvimbo uye floppy disks, uye kunyatso kubva kunetiweki.
Dhawunirodha Debian GNU / Linux
Nhanho nhanho kumisikidza
Nhanho-nhanho mifananidzo yekumisikidza + tsananguro pfupi ..
Ichi ndicho chinyorwa chekutanga chatinozoona patinotanga .. isu sarudza Grphical Gadza
Root password ...
Username yemunhu asiri-admin mushandisi.
Pasa kune mushandisi akagadzirwa mune yakapfuura nhanho .. mushandisi kwete admin
Mune ino nhanho isu tinogadzirira iyo hdd kutaurira iyo inosimudza kuti ndeupi rudzi rwekuparadzanisa ... sezvo isu tichiwanzove mune imwe chaiyo, isu tinopa sarudzo yediski rese ... asi kana tiri mumushini wepanyama tinosarudza manyore uye sarudza yemahara yakagadzirwa kare ...
Isu tinosarudza diski kupatsanura.
Isu tinosarudza yekutanga sarudzo sezvo mamwe ari evashandisi vane ruzivo zvishoma sezvo isu tichigona kumisikidza sarudzo dzinoverengeka ...
Muchiratidziri ichi tave pedyo nekusimbisa kunyorwa kweshanduko ku diski ... (unoziva kangani ndakarasa zvese pandakatanga mu linux kumashure mumakore 98/99 lol)
Isu tinoti hongu, sezvo isu tiri kana tichizove vakuru linux manejimendi uye isu TINONYANYA chokwadi nesarudzo dzakasarudzwa hehe
Isu tinosarudza kuti aiwa toenderera mberi ...
Isu tinosarudza izvo kwete woenderera ... (pane zvishoma zvasara)
Muchiratidziri ichi tinosarudza chinangwa cheseva yedu .. ndiko kuti, kana ichava mail server, ftp, kupurinda, ssh, nezvimwe.
Zita reboka rebasa reSamba (faira kugovana)
Tinoda kunyora iyo grub (linux bootloader) kudiski? tinoti hongu ...
Tazviita!!!!! kumisikidza kwapera ok !!
Uye isu tinoona yedu inodiwa GRUB ...
Kutenda Dany Rey!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Debian 6 yekumisikidza nhanho nhanho
Orlando hernandez akadaro
Anodiwa Santiago, ndinofunga hauna kutarisa graphical desktop nharaunda panguva iyo hwindo rine chirongwa chekumisikidza rakauya, asi haazi magumo epasi, iwe unongofanirwa kuisa desktop. Ini ndinofungidzira kuti iwe paunotanga pc yako inopedzisira yaguma mune terminal, saka unofanirwa kupinda seye super mushandisi, chimwe chinhu chakadai.
password, ipapo iwe unowana chiratidzo # ipapo iwe uchaita izvi;
# apt-tora kuisa (yako yaunofarira desktop) uye mirira kusvikira yaisa uye voila
Pindura Orlando Hernandez
Luis Alexis Fabris akadaro
Mhoro d4ny kana uine nguva ini ndaizoda kuti undipe ruoko kubva mazuva mashoma apfuura ini ndakaisa debian 6 ndichitevera dzidziso iwe yawakasiya, asi ndine dambudziko kana ndichida kuisa madhiraivha eangu kadhi isina waya ..
Ini ndakamirira mhinduro yako .. Uye nenzira iyo dzidziso yakanaka kwazvo ...
Pindura kuna Luis Alexis Fabris
Santiago Corvalan akadaro
Mhoroi vanhu vese, ndine dambudziko. Mushure mekupedza kumisikidza, pandinotanga zvekare, Debian haina kubhoti graphically. Zvandinoita?
Pindura Santiago Corvalán
Emanuel Jorge Malfatti akadaro
Mhoro zvakanaka kune vese. Ino inguva yangu yekutanga kuti nditaure nenzvimbo ino. Ndinobvunza nekuti ndine kusahadzika. Ndeipi vhezheni yaDebian yaunokurudzira? Nekuti ini ndakaverenga kuti kune yakagadzikana imwe, mumwe bvunzo, nezvimwe uye zvagadzira zvakawanda zvekuvhiringidzika kwandiri. Uye kana uchiedza kurodhaunta, ona kuti rinoti dvd 1, dvd2, dvd3: kana cd1, cd2 ... uye chokwadi ndechekuti ini handinzwisise zvakanyanya chii kana chandinofanira kurodha pasi. Ndiri newbie, asi kwete zvakanyanya, hehe. Ndatenda kwazvo nenguva yenyu. !!!
PS: Ini ndinobva kuUbuntu. Izvozvi ndiri kunyora kubva kuLinux Mint 14. Ini handichadi Ubuntu zvakare, uye ini ndaida kuyedza ivo vanofanirwa, ikozvino ndiri kurodha pasi Mepis neLinux Mint zvichibva paDebian.
Pindura kuna Emanuel Jorge Malfatti
Mhoroi, ini ndanga ndichiisa debian 7.2 uye pandakanga ndichiisa iyo grub, yakakanda chikanganiso chekuti yaisakwanisa kuisa grub, gare gare, ini ndinoedza kuisa iyo LILO asi yakakandawo kukanganisa, chii chinoitika? -ZIVA: Ndiri kuisa debian kubva ku-virtualbox -2º noti: iyo debian yandiri kuyedza kuisa inouya neGNOME inosanganisirwa nedebian mune .iso
Pindura kuna Francisco
Izvo hazvishande mushure mekuisa linux debian 7.5.0 kunyangwe 7.6.0 haina kundiudza kuti haina kuwana bhuti
Kutenda dzidziso, yanga ichibatsira.
Yakanaka, linux kurodha ichapedza munguva pfupi; Ini ndinochengetedza iyo link yekuzotarisa kwekupedzisira. Iwe uchave uine chimwe chinhu chine chekuita nezve zvivakwa, zvinyorwa zvekare nezvimwe ... ???
Mhoroi, ndinofanira kutaura kuti ndiri newbie kune debian 6.0.6 uye ndakave nematambudziko akati wandei sezvo ethernet uye wifi chiteshi chemuchina wangu zvisina kuvhurwa otomatiki, kana kugona kuona kurodha pasi nekuisa zvirongwa zvitsva, mumwe munhu angandibatsira nazvo here?
Pindura kuna Gratian
Microsoft inoshanda pamwe neLinux ???
Iyo Debian inodzokera kuGnome seyakagadzika Desktop Nharaunda?